बालुवाटारको 'बर्थ–डे केक'ले यसरी मोड्यो वाम एकताको भविष्य
निरिह माओवादी– दाह्रा नङ्ग्रा फुस्किएको सिंहजस्तै !
काठमाडौं, ३० चैत । एमालेभित्र ओली र नेपाल समूह खेलाएर शक्तिमा रहिरहने प्रचण्डको सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो, जतिबेला बालुवाटारमा माधव नेपालको जन्मदिनमा केपी ओलीले केक काटे । त्यहाँ केक मात्रै काटिएको थिएन, त्यहाँ त एमालेभित्रको गुटको सीमारेखाको डोरी काटिएको थियो ।
बालुवाटारमा माधव नेपालको बर्थडे सेलेब्रेसनसँगै एमालेको पुरानो आन्तरिक शक्चि सन्तुलनमा नयाँ आयाम देखिएको थियो । त्यही आसपासबाट प्रचण्डको एकीकृत पार्टीमा शक्तिशाली बनिरहने सपनामा खतराको घण्टी बज्न थालेको थियो ।
एमालेमा पुरानै शक्ति सन्तुलन भएको अवस्थामा एकीकृत पार्टीमा आफू शक्तिशाली हुने प्रचण्डको सपना थियो । यो कुरा स्पष्ट बुझेका ओलीले वाम एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई करबलले तानेका थिए ।
पछि एमाले र माओवादीभित्रका केही नेताहरुले बाबुरामलाई गठबन्धनमा बस्न दिएनन् । ओलीले बाबुरामलाई दिएको बचन पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यहाँ अरु कुनै विचार वा सिद्धान्तका कुरा नभएर एकीकृत पार्टीमा शक्तिशाली बनिरहने प्रचण्डको रणनीतिले काम गरिरहेको थियो ।
ओलीको तत्कालीन बुझाई थियो– प्रचण्डले एमालेका केही असन्तुष्ट नेता तानिहाले भने बाबुरामले माओवादीबाट केही नेता तान्छन्, हिसाबकिताब बराबर । तर, वामदेव, नारायणकाजी, बादल लगायतका नेताहरु देखाउँदै वाम गठबन्धनबाट प्रचण्डले बाबुरामलाई बाहिर निकालेरै छाडे ।
‘तपाईं किन ओलीतिर बाट आउनुभयो, मलाई त्यहिँनेर शंका भयो,’ प्रचण्डले बाबुरामलाई निर्वाचनपछि भनेका कुरा सम्झिँदै एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘बाबुरामजीको इन्ट्री नै गलत ढोकाबाट भयो भन्ने हाम्रो सिएम (प्रचण्ड) को बुझाई रह्यो ।’
एकीकरण नहुँदै एमालेमा प्रचण्ड बहुमतमा, ओली अल्पमतमा !
अहिले एमाले वृत्तमा चर्चा छ– ‘माओवादी पार्टी भनेकै प्रचण्ड हुन्, उनी स्वयम् दाह्रा नङ्ग्रा निकालिएको सिंहजस्तै भएका छन् ।’ एमालेको यस्तो विश्लेषण प्रचण्डको कानमा त्यतिबेला पर्यो, जतिबेला प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेर सचिव सरुवा गरेपछि गुहार माग्न प्रचण्ड निवास पुगेका माओवादीका मन्त्रीहरुले यो कुरा सुनाए ।
एकजना एमाले नेताले चिया गफको क्रममा माओवादी नेतालाई भनेछन्, ‘तपाईंको पार्टी भनेकै प्रचण्ड हुन्, उनी त दाह्रा–नंग्रा फुस्किएका सिंहजस्तै हुन् । हेर्दा त सिंह नै देखिन्छन् तर, लड्नुपर्यो भने न उनीसँग दाह्रा छ, न नङ्ग्रा नै । यसरी हेर्दा प्रचण्डले अब मागेरै खाने हुन् । माग्नै परेपछि अन्तभन्दा मुखिया अर्थात् शक्तिशाली एमालेमै बसेर माग्ने हुन् । माग्ने मान्छेले धेरै फुर्ति गरेर हुन्छ ?’
ओली निकट एमाले नेताको यो भनाई यतिबेला माओवादीभित्र भाइरल बनिरहेको छ । मन्त्रीहरुको गुहार, ओलीको गतिविधि र एमालेको टिप्पणी सुनेपछि प्रचण्ड हच्किए र समानतामा आधारित एकताको मन्तव्य दिन थाले । समानतामा आधारित एकता भने पनि यतिबेला प्रचण्डको ध्यान एकीकृत पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमै छ । माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएको खण्डमा पार्टी फुटाउनु परेमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या कसरी पुर्‍याउने ? यसैमा प्रचण्डको अर्जुनदृष्टि रहेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन् ।
त्यसो त, प्रचण्डको जस्तो ओली समूहको पनि जोड यतै छ । एकीकृत पार्टीको शक्ति सन्तुलन र बर्चस्वको प्रश्न वाम एकताभन्दा अगाडिदेखि कै राजनीति थियो । ‘चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध र अन्य सैद्धान्तिक विषयलाई महत्व दिएर नेताहरुले मन्तव्य दिइरहे पनि अन्तर्यमा ४० प्रतिशत पुर्याउन चाहने र पुर्याउन नदिने रस्साकस्सी नै एमाले–माओवादी एकताको मुख्य अवरोध हो,’ एकता प्रक्रियाका छलफलहरुमा भाग लिइरहेका एक माओवादी नेताले भने, ‘वैशाख ९ को एकता त टरिसक्यो, त्यसपछि पनि एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ यही शक्ति सन्तुलनमाथिको भ्रम र विश्वासले निर्धारण गर्दछ ।’
अहिले पनि एमाले ४० नपुग्नेगरी र ३५ कटाएर माओवादीलाई स्थान दिन तयार छ । तर, ४० पुग्नैपर्ने अडानमा माओवादी छ । एमाले नेता वामदेव गौतमले ४० नकटी माओवादी एकतामा नआउने सन्देश एमाले मुख्यालयमा पुर्याइसकेका छन् ।
महाधिवेशनमा एमालेले माओवादीलाई बढार्न सक्ने आशंका पनि माओवादीका कतिपय नेताहरुमा छ । यसबीच प्रचण्डले दुईवटा महाधिवेशनसम्म माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिनुपर्ने माग लिएर ओलीसम्म पुगेको पनि एमालेका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।